Shina: Mampiahiahy ny mpisera an-tserasera ny fikasan’ny governemanta hanitatra ny fanaraha-maso amin’ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Avrily 2019 3:24 GMT
(Marihina fa tamin'ny 20 Desambra 2012 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nanambara ilay mpikatroka mpanome vaovao fanta-daza Wen Yunchao fa namoaka torolàlana ho an'ny sehatra fampahalalam-baovao lehibe ny Sampan-draharahan'ny Fampielezan-kevitry ny Antoko Komonista Shinoa mba hanasongadina ny lahatsoratra ofisialy roa manamarina ny sivana amin'ny aterineto. Navoaka ny 20 Desambra 2012 ireo lahatsoratra roa ireo.
Mitondra ny lohateny hoe: “Faritra mitera-doza ho an'ny angon-drakitra tafaporitsaka ny aterineto” 個人信息洩露，網絡是重災區 ny tapany voalohany. Navoakan'ny gazety People's Daily, seha-baovao ofisialy avy amin'ny Komity Foiben'ny Antoko Komonista ao Shina. Mitondra ny lohateny hoe “Sazio ny heloka amin'ny aterineto, hamafiso ny fiarovana sy ny fitantanana ny vaovao ao amin'ny aterineto ” (懲治網絡違法犯罪，依法加強網絡信息保護和管理) ny tapany faharoa.
Fanazavana ny fanehoan-kevitra roa teo aloha momba ny fitantanana ny Aterineto nivoaka ny 18 sy 19 Desambra avy amin'ny People's Daily ihany ny lahatsoratra roa, izay mitondra ny lohateny hoe ” Tsy ivelan'ny Lalàna ny Aterineto” [nataon'ny China Media Project fandikan-teny] （網絡不是法外之地）sy hoe ” Fomba iraisampirenena ny fandrindrana ny Aterineto mifanaraka amin'ny lalàna ” 互聯網：依法監管是各國慣例）.
Mino i Wen, mpanaramaso matihanina amin'ny fampitam-baovaom-panjakana Shinoa, fa manambara onjam-pamoretana vaovao atao amin'ny mpanohitra an-tserasera ity hetsika ity izay nitovy tamin'ny ” fanentanana manohitra ny gaboraraka” tamin'ny taona 2009 .
Manasongadina izay lazainy ho “voka-dratsy ateraky ny aterineto” ny “Tsy ivelan'ny Lalàna ny aterineto “, tamin'ny filazana fa sehatra iray ho an'ny “fampielezana hosoka, fitsikerana an-tserasera ary tsaho” izany
Mitanisa ny ohatra avy amin'ny firenena hafa ilay ampahany iray hafa hoe ” Mahazatra iraisampirenena ny fandrindrana ny Aterineto mifanaraka amin'ny lalàna“, ary mampiasa izany hanamarinana ny fanaraha-maso an-tserasera sy ny fampiasana ny sivana amin'ny aterineto, toy ny rafitra fanoratana anarana tenaizy (Soeda), ny ady amin'ny heloka an-tserasera, ny asa fampihorohoroana (Etazonia), ny sivana amin'ny kabary fanavakavaham-bolonkoditra sy nazi (Alemaina), ny rafitra lisitra mainty amin'ny aterineto sy ny fanamelohana ny fanalam-baraka atao amin'ny Fitondram-panjaka (Thailandy), ary ny lalàna manohitra ny fikomiana an-tserasera sy ny fitenenan-dratsy (Singapaoro).
Ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Faritra mitera-doza ho an'ny angon-drakitra tafaporitsaka ny aterineto” dia fanangonana naverina indray momba ny fangalarana maripanondroana manokana amin'ny fiainana andavan'andro sy ny fampiasana ny angondrakitra ho an'ny fividianana entana an-tserasera tsy mazava sy ny varotra an-tserasera amin'ny angondrakitra manokana. Tsara ny manamarika fa tsy mifandray mivantana amin'ny olana momba ny fiarovana ny tsiambaratelon'ny fiainana manokana an-tserasera izany.
Namerina izay nolazaina tao amin'ny ” Tsy ivelan'ny Lalàna ny Aterineto” roa andro lasa ny tapany faharoa hoe “Sazio ny heloka amin'ny aterineto, hamafiso ny fiarovana sy ny fitantanana ny vaovao ao amin'ny aterineto“, ary manamarina ihany koa ny (tokony hanaovana) fanaraha-maso an-tserasera sy ny sivana .
Naneho hevitra manohitra mafy ireo lahatsoratra roa ireo ny mpisera aterineto teratany Shinoa sasany be ahiahy ary nanamarika fa ho lasa “didy jadona” any Shina ny “fomba fanao mahazatra (ara-padintseranana) avy any ampitan-dranomasina”, araka ny voalazan'ny taratasy ofisialy, noho ny tsy fahampian'ny dingana ara-demaokratika eo amin'ny adihevitra politika sy eo amin'ny olona voafidy ao amin'ny governemanta.
Toa nohamafisina tamin'ny alalan'ireo torolàlana ofisialy farany natao ho an'ny fampitam-baovao ireo ny teorian'ny firaisana tsikombakomba mikasika ny drafitr'ireo manampahefana amin'ny fanamafisana ny fanaraha-maso ny aterineto.